Skype maringe Face nguva
Kubvumbi 17, 2020 na Nhungamiro Yedzidziso Siya Revo
Kwepamusoro rinokosha kukosha munyika yanhasi. Kana uchida kutaura neshamwari uye mhuri kana uchida kuti chokuita vashandi newe, unofanira kuva chishandiso akakwana kuti anogona kukubatsira kuita kwako zvinodiwa.
Kare, vanhu aisiita mail kuonana nevamwe, asi ikozvino vanhu vanosarudza kuita pavhidhiyo kuburikidza pavhidhiyo platforms. For kwepamusoro, Makambani akawanda vakatanga dzavo mavhidhiyo nvidia Apps anobvumidza kuti aise panodana kubva pose pasi pose.
Pakati zvose-software iyi dyidzana, Apps maviri vagara nokuenzanisa pfungwa nyika. Ava vaviri tsere Apps vari richizivikanwa sezvo Face Time uye Skype.
Sezvineiwo, vose Apps (Face Time uye Skype) zvakagadzirirwa chete chinangwa kuti zviremera vanoshandisa dzavo kuti basa mumagariro, kuti maCD kana mavhidhiyo vachidzifudza, kuita mameseji, kuti boka Video foni zvakawanda.
Unogona kushandisa nyore Apps izvi pamusoro siyana mano kusanganisira smartphones dzenyu, mahwendefa, Desktop, mahwindo, nehurukuro yokurinda, iPods uye zvakawanda.
Izvi pavhidhiyo Apps vakaita izvozvo zvinoshamisa nyore kuti vanoshandisa zvose kuti chokuita mumwe mukati mumasekonzi pasinei nharaunda, daro kana nguva. Vakaita kuti zvikwanisike kuti unakidzwe pazororo yenyu kana pfungwa dzenyu bhizimisi rwendo tikaramba chokuita nemhuri yenyu, vashandi kana vatengi. Both Apps vari chaizvo inotakurika, mutengi noushamwari uye nyoreka.
asi zvakadaro, pane zvakasiyana-siyana zviri izvo kusiyanisa Apps izvi kubva kune umwe. Munyaya ino, uchawana pfungwa pfungwa yemakwikwi zvinhu, Hazvizivikanwi kugarisana, kusangana, uye unhu vose Skype uye Face Time. Nyaya ino ichataura regai iwe kusarudza Software masutu impeccably maererano zvaunoda.
0.2 Kugarisana pamusoro Skype:
1 Zvinoumba Skype
1.1 Kusangana pakati Skype
1.2 Kuva Skype:
1.4 Kugarisana pamusoro Face Time:
2 Zvinoumba Face Time:
2.1 Kusangana pakati Face Time:
2.2 Quality Chichiitwa Face Time:
2.3 Zvakawanda kubva pasiti yangu
Chimwe chezvinhu zvapararira uye chinonyanya yakawandirwa Video conferencing Apps ndiro Skype. Anwendung uhwu hwakatanga yakatanga kufamba muna 2003 uye pashure makore mashoma ari 2011 Microsoft Company atenga. Microsoft akaita dhiri izvi $8.5 bhiriyoni. The chikuru Pfungwa-software iyi kuti vanoishandisa aro kuitisa risingaperi Video uye zvakarekodhwa zvinoda.
Mukuwedzera iyi, Skype anopawo vatengi ayo basa mameseji ine manzwiro uye Stickers. Skype agara chakabatikana kuzadzisa ayo mutengi racho. Nokuda kwayo vakarongeka mugumisiro nezvatinovavarira zvabuda, Skype akamborara kukunda guru.
With yaro yakakwirira tsanangudzo ekuteerera nemavhidhiyo zvinotoda, Skype akaita akakwezva vakawanda mugove dzakawanda zvinoda. Zvinoshamisa zvose mabasa aya, Skype yakabudirira vakakwanisa kuti zita rayo akasiyana mudare kutongwa uye Bulletins.
Kugarisana pamusoro Skype:
Rimwe zvikuru zvakanakira Skype ndiko, Anwendung ichi anoshandira vakawanda mano. Haufaniri kuva kuramba shoma apo kushandisa ichi Video conferencing Anwendung. The inopa uye mabasa Skype nokupinza mano zvose kusanganisira maserura, mahwindo, makombiyuta, mahwendefa, uye dzimwe mhuka papuratifomu namano.
Nokuda rakakura mabasa ayo uye kugarisana, Skype ane zvakawanda vatengi kuti Sony, Mutambo we play station, Smartphones, mahwindo, Os X mano, Android, Blackberry, Symbian, Samsung Smart TV, nezvimwewo.
pakutanga, Skype akasikwa kupa makaseti zvinoda kuita kuti vatengi ayo. Asi pashure yakakwirira vade uye kuchinja dzinoitwa kutaurirana, pava paya ndakatanga kupa pakarepo mameseji uye mavhidhiyo panodana nyika.
Kusiyana Face Time, Skype haina kugadzirirwa kupa paIndaneti vhidhiyo chete kana zvakarekodhwa zvinoda. Kunoitawo kuti kudana munhu ari pafoni kana runhare nhamba. Pakanzi Izvi zvinobatsira chaizvo kuparidzira vanhu vose apo paIndaneti kubatana murombo kana kunonoka.
For paIndaneti vhidhiyo kana zvakarekodhwa zvinoda, Skype anoita mutariri chinhu. Asi kana uchida kudana munyika nhamba, Mobile nhamba kana pafoni nhamba, ipapo unofanira kubhadhara kuzvinyoresa kubhadhara. Skype inopa anoyevedza urongwa kuti akanyoresa kuti is zvinoda.
The prices siyana zvinoenderana mudunhu renyu uye mari. Tinogona kufunga Skype serimwe rinogona kutsiva pamusoro pafoni asi zvakadaro, Anwendung izvi hazvigoni kuita sezvo yokutsiva wayo. Mumwe chikonzero chikuru ndechokuti haugoni kuita chimbichimbi panodana kuburikidza Skype.
To Activate Skype, unogona kushandisa kana Wi-Fi Internet kubatana kana wako cellular Network Data. Kutanga kushandisa Skype, unofanira kuva Microsoft email ID kana Skype ID. Kamwe iwe uchava login yenyu Skype nhoroondo, muchawana pasi kuonana riri kare nekugadzirwa Software.
Unongofanira tinya anoishandisa uchida kuzodana. Unogona kutsvaka chero unodikanwa vokukurukura nokunyora wake zita muna kutsvaka bhaa. Unogona nyora yako kupfuura kushandiswa kuonana nokuwedzera navo favorite.
Panguva dzako paIndaneti, Skype anopa mikana akawanda kusanganisira mbeveve kudaidzwa, chinja kamera, inzwi-chete nzira uye kugumisa kufona. Skype uchaisawo dyidzana chaizvo mameseji mabasa vanoshandisa ayo.
For zvakavanzika, Skype unokubvumira kuvhara kana Kudzima kuonana. Mukuwedzera iyi, asiwo achibvumira kuti kusateerera shoko chikumbiro upi kushandiswa kana usingazive naye.
Kusangana pakati Skype
Kana uri Os X User kana iOS mushandisi; unogona kuwana rako kero mabhuku uye kutaura vachishandisa Skype. Skype anogona kutumira panodana chero nhamba zvaunoda. Unogona kubatsirwa basa iri nokutenga Skype chikwereti. Skype zvachose vhidhiyo conferencing pachikuva unobvumira vanoshandisa siyana mano kuti zvakabatana achishandisa Software chete.
Zvinosuruvarisa, Skype haadi kupa hwakanaka dzemakaseti okuteerera nemavhidhiyo zvinotoda. dzimwe nguva, kunyange kana uchinwa mukuru-nokukurumidza internet-, unogona vachiri kutarisana pasi chisarudzo shuttering mavhidhiyo zvinotoda.
nyaya idzi zvinotonyanya kuoma kana ukaedza kushandisa Skype panguva kwevhiki. Chikonzero chaiyo iri, Skype ari kupa rubatsiro aro mano zvose uye nokuda inopiwa nhamba vanoshandisa, vanhu vanotarisana unhu nyaya. The zvakanaka ndiko chikwata Skype kushanda kugadzirisa nyaya iyi kuti vatengi kugutsikana.
Face Time ndeimwe usashandisa akakurumbira kuti nguva dzose anoita vanoshandisa ayo afare uye kugutsikana. Izvi Video nvidia Software kwakatangwa ne Apple mu 2011. software iyi yakanga chete zvakagadzirirwa kuti nyore Apple mudziyo vanoshandisa kusanganisira iPads, iPhones, iPods, uye Macs kuramba interlinked kuburikidza tichinakidzwa vhidhiyo uye zvakarekodhwa mukukurukurirana.
Face Time ari kunakidzwa huru bimvu kuti kugutsikana vatengi. Maererano neongororo, kupfuurisa 70 miriyoni Os X vanoshandisa uye iOS vanoshandisa vari kubatsirwa Face Time kutaura dzimwe vanoshandisa.
Kugarisana pamusoro Face Time:
Unogona kumhanya chete software iyi musi Apple namano. Unofanira kuva Mac kana iOS mudziyo pamwe mberi rakatarisa makamera kutanga kwako paIndaneti kuburikidza Face Time. Face Time ane paanogumira kugarisana uye unongosvikika kuti Apple mano. Unogona kutanga kushandisa Face Time kana uine chimwe zvinotevera
iPad 2 kana gare gare,
iPhone 4 kana gare gare
4fung chizvarwa iPod kana gare gare
Mac Os X 10.6.6 uye gare gare
Kana mano ako havana mu-akavaka kamera, ipapo unofanira batanidza ane zvokunze padandemutande kamera kutanga kuitisa Video vachidzifudza.
Zvinoumba Face Time:
pakutanga, Face Time anobvumira vatengi aro kubatsirwa mabasa ayo achishandisa WiFi Network kwokubatana chete. Asi mberi uye shanduka kwezvinhu, izvozvo akabvumira yayo vatengi kumhanya Anwendung ichi achishandisa mashoko cellular network uyewo.
Mumwe mukana yemakwikwi pakati Face Nguva, kusafanana Skype haufaniri kuenda kuburikidza nedanho hunoenzana nhoroondo yako. Ukangotanga uchishandisa Face Time, izvozvo zvaitika integrates uye synchronizes zvose zvaidiwa mashoko ose kero mabhuku uye kutaura kuti iOS uye Os X vanoshandisa.
Face Time zviri nyore chaizvo kushandisa. Kana iwe achizviendesa bhatani nenzvimbo foni yako, unogona kuona siyana zvinobatsira mikana kusanganisira chinja kamera, mbeveve maikorofoni kana kugumisa foni yako. Apple haadi kupa ayo vatengi VOIP mabasa. Skype kuita.
Kusangana pakati Face Time:
Apple ane mupendero kuti nokusangana vose mukuru-kuita Software uye Hardware kuti mavhidhiyo nvidia basa. Face Time chakagadzirirwa kupa zvawanikwa ne A-dzinoti "ezvinhu ari Chip" uye iSight kamera. Kupa hwatakazvarwa migumisiro mavhidhiyo uye zvakarekodhwa zvinoda, Face Time asingadi kushanda pamwe chero yakaderera bandwidth kwokubatana.
Apple agara strived zvakaoma kuendesa shoma yepamusoro uye kunoshamisa mugumisiro vaifarira Apps kuti vatengi ayo. Face Time ari vakagadzirawo pamwe chete muuzivi Apple, haugoni kuwana murombo mavhidhiyo zvikanganiso uye izwi anodonhedza munguva kukurukura kwako. Face Time rakagadzirwa maererano mararamiro kwenyika Apple.
Quality Chichiitwa Face Time:
Apple agara akasimbisa pamusoro unhu uye kunaka yemabasa kuti ape. Ichi ndicho chikonzero nokuda iro Face Time ane unhu hwakanaka kupfuura ayo mukwikwidzi Skype. Face Time inopa yepamusoro mavhidhiyo nvidia mabasa hunobva dzakawanda mitemo.
Nokuti zvose Video uye zvakarekodhwa zvinoda, Face Time inopa yakajeka, risina kumiswa, ruzha zvakajeka uye vakagwinya mufananidzo pamwe wakatsetseka chitsungo.
Izvi App zvinoshamisa Face Time achibvumira iwe kuti ndangariro dzedu dzakanaka, kuramba kubatana uye kuti ataure mashoko.
The chenguva uye unhu hwakanaka kutaurirana kunokoshawo kana uine kukosha chinhu kutaura, kana uchida kupa mharidzo yako kana uchida nemhosva yako vabvume wako kutengeswa nenamo uye mazita anopfuurira.
Face Time uye Skype, zvose zviri incredible Apps kuti kuitisa vhidhiyo kana zvakarekodhwa zvinoda. Kana uri achiputa Apple mudziyo uye uchida kuona youpfu yepamusoro unofanira kushandisa Face Time.
Kusiyana, kana uchida kuti chokuita nevanhu kunze kwenyika Apple mano ipapo Skype ndiyo yakanakisisa zvachose sarudzo iwe.